Yuunivarsiitiin Bulee Horaa guyyaa hardhaa Dhaabbata Qorannoo fi Qu’annoo Gadaa fi Aaadaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYuunivarsiitiin Bulee Horaa guyyaa hardhaa Dhaabbata Qorannoo fi Qu’annoo Gadaa fi Aaadaa
Yuunivarsiitiin Bulee Horaa guyyaa hardhaa Dhaabbata Qorannoo fi Qu’annoo Gadaa fi Aaadaa (Institute of Gadaa and culture Studies) jedhu kan waggaa tokkoon dura eegale sadarkaa hooggansa olaanaa yuunivarsiitiitti (Director) bakka hayyoonni Oromoo hedduun argamanitti eegalee jira. Sagantaa baninnisa kanaa irratti hayyoonni Oromoo yaada armaan gadii kana dubbatanii jiru.
“Yuunivarsiitiin keenna sirna Gadaa fi Aadaa Oromoo sadarkaa UNESCOtti galmeeffame kana qo’annoo fi qorannoon gabbisuun eennummaan saba keennaa sadarkaa idilaaddunyaatti beekamtii isaaf malu akka argatu cimee hojjetaa jira.” Dr. Caalaa Waataa, Piresidaantii Yuunivarsiitii Bulee
“Sabni sirnaa fi aadaa qabu akka itti wal-bulchuu fi waliin bulu waan hubatuuf aadmaleef hin saaxilamu.” Dr. Gammachuu Magarsaa, Hayyuu Antirooppooloojii Yuunivarsiitii Finfinnee irra
“Abbaan Gadaa Oromoo gaafa Baallii dabarsee Abbaa Gadaa haaraaf kennu “Gadaan teeti Gadaa tiyya haa caaltu!” jedha. Kunis demokiraasiin Oromoof nafa/qaama ta’uu ragaadha.” Dr Bokkuu Xachee, Piresidaantii Yuunivarsiitii Booranaa fi Hayyuu Antirooppooloojii
“Sirna Gadaa Oromoo keessatti daa’imummaa fi sooramni hin jiru. Daa’imni tokko umrii ijoollummaa irraa kaasee #Dabballee ta’ee hanga #Yuubaa fi jaarsa qululluutti Sirna Gadaa keessatti gahee uummatasaa tajaajiluu qaba. Akkasumas, foqa naquu ykn Yuunivarsiitii Gadaa keessatti namni tokko umrii digidamii saddeetiif (28) leenji’aa guddata. Kun dimokraasiin addunyaa kan Oromoo ta’uu agarsiisa.” Jaamjam Uddeessaa, qorataa aadaa fi seenaa.
Hayyoota teennan hedduu galatoomaa horaa bulaa jennan. Keessattu worra yaada kana eegalan Nagessa Mokonnaa, Dr. Caalaa Waataa galanni keessan gudda. Haaluma kanaan Yuunivarsiitiin Haramaayaas sirna kana irratti hojjachaa waan jirtuuf sagantaa bareedaa akkanaa qopheessitee hayyoota Oromoo akka affeertu qaamota dhimma kana irratti hojjachaa jiran Dr. Darajjee Makkoo Billii fi Dr. Gutema Imana Keno qaabsisuu barbaada.
Qaamni mootummaa Sirnoota Gadaa kana sirna barnoota ammayaa keessa galchee akka ilmaan keenna bifa haaraan sirna kana jalqabaa kaasanee baratan karaa kamiinnuu dhiibba hayyoonni Oromoo kan Oromummaan itti dhagahamu akka godhan waamicha goonaaf.